Izindaba - Ukuqinisekiswa kokudla
NgoJulayi 28, 2020, umnyango ofanele weShandong Provincial Food and Drug Administration wagunyaza inhlangano yokuhlola evela eceleni, i-SGS, ukuthi ibuyekeze uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi lweLimeng pharm, olususelwe ohlelweni lokuphathwa kwe-HACCP lwamazwe omhlaba. Amaphrojekthi wezithako zokudla, izimpushana zobisi namaswidi we-gummy abuyekezwe.
Ezinsukwini ezimbili, ochwepheshe abavela eceleni babeqedile ukubuyekeza okuphelele kohlelo lwethu lokuphathwa kwekhwalithi. Okuqukethwe kokuhlola kufaka phakathi indawo yehadiwe kanye nemibhalo yesoftware. Ochwepheshe ngaphambi kokubheka izinto zokusetshenziswa, ilabhorethri, ama-workshops, izindawo zokukhiqiza, izixhobo zokukhiqiza, kanye nezinto zokubona.
Ngokwesici sesoftware, ochwepheshe babuyekeze imibhalo yamafayela, futhi ngokuya ngezidingo ze-HACCP, ochwepheshe bakhomba izimo ezimbalwa ezibalulekile, ezisuselwa kunqubo ye-HACPP endaweni yokulawula ebalulekile namanye amaphuzu. Okunye, kubhekwe namarekhodi okuqeqesha, ukuphatha ezempilo kanye namafayela okugcina.
Ngokuhlangenwe nakho kokuphuma kwezinsuku ezimbili, ochwepheshe be-SGS bamukele imisebenzi yethu ekukhiqizeni nasekuphatheni, futhi bathemba ukuthi sizobeka izimfuno eziphakeme kunqubo nokuphathwa kokukhiqiza, okususelwa ku-HACCP.
Ngokwemiphumela yokubuyekezwa, inkampani yethu yahlela abaphathi abaphezulu nabasebenzi ngokuchibiyela ukungahambisani, nokuqinisekisa inqubo ye-HACCP ekukhiqizeni. Wonke umuntu unesibopho sokuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu iphilile futhi yamukelwa yimakethe namakhasimende. Enqubweni yokuthuthuka kweLimeng pharm, sihlala sigcina ngokubambisana nezinhlangano zokuhlola ezidumile zomhlaba wonke, njenge-SGS, BSI UK, TUV nezinye izinhlangano ukuze uhlelo lwethu lokukhiqiza lusebenze kahle futhi siqinisekise ukuthi imikhiqizo yethu yamukelwa yi-oversea .